हामीसँग भविष्य सपार्ने शक्ति छः कमला ह्यारिस :: Setopati
कमला ह्यारिस (अनुवादः सबिता आचार्य) मंसिर ५
कङ्ग्रेसम्यान जोन लुइसले आफू मर्नुभन्दा पहिला लेखेका थिए, 'लोकतन्त्र कुनै राज्य होइन। यो एक नियम हो।'
उनको भनाइको तात्पर्य थियो, अमेरिकाको लोकतन्त्रको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो केवल लोकतन्त्रका लागि लड्ने हाम्रो इच्क्षाशक्ति, यसको सुरक्षा गर्ने हाम्रो संकल्पजत्तिकै बलियो छ। यसलाई स्वतःस्फूर्त पाएको चिजका रूपमा कहिल्यै लिएका छैनौं। लोकतन्त्र रक्षा गर्न हामीले आफैं संघर्ष गर्नुपर्छ। यसका लागि बलिदान चाहिन्छ। यद्यपि, यसमा खुसी र प्रगति पनि छ। किनभने, हामीसँग भविष्य सपार्ने शक्ति छ।
यस निर्वाचनमा हाम्रो लोकतन्त्र मतपेटिकामा हुँदा अमेरिकाको आत्मा तराजुमा थियो। यी सबै कुरा सम्पूर्ण विश्वले नियालिरहेको छ। ठीक यही बेला तपाईं पनि अमेरिकाको नयाँ दिनको सुरूआतको होस्टेमा हैंसे थप्न टुप्लुक्क आइपुग्नुभएको छ।
हाम्रो यो अभियानमा काँध थापेको असाधारण टिम छ। यस प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सफल पार्न पहिले–पहिलेको निर्वाचनमा भन्दा धेरै मानिसलाई एउटै मालामा गाँस्दै हामीलाई विजयी बनाएकोमा सम्पूर्ण हर्ताकर्ता स्वयमसेवकलाई धन्यवाद।
कृतज्ञता, ती निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र निर्वाचन अधिकारीलाई पनि जसले अथक प्रयास गरेर हरेक मत गन्ने अभिप्रायसाथ मतदान सम्पन्न गराए। हाम्रो लोकतन्त्रलाई एकाकार गराइ यसको अखण्डताको सुरक्षा गर्नु भएकोमा तपाईंहरूप्रति पनि शिर झुकाएर श्रद्धा व्यक्त गर्छौं।
हाम्रो देशलाई सुन्दर बनाएका अमेरिकी जनतालाई पनि हृदयदेखि नमन! आफ्नो आवाज सुनाउन अहिलेसम्मकै अत्यधिक संख्यामा तपाईंहरूले निर्वाचनमा भाग लिइदिनुभयो।
मलाई थाहा छ, पछिल्ला केही महिनायताको समय एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। यो समयमा शोक, दुःख, पीडा, चिन्ता र संघर्ष व्याप्त छ। तर, यही समयमा हामीले तपाईंको साहस, लचकपन र उदार मन पनि देख्यौं।
अबको चार वर्ष, हाम्रो जीवन र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा समानता र न्याय स्थापित गर्ने मोर्चामा ऐक्यबद्ध हुन आउनुभएको छ। यो यात्रामा तपाईंले मतदान गरी आफ्नो आवाजमार्फत् स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। तपाईंको रोजाइमा आशा र एकता, शालीनता र विज्ञान परे। अँ त्यसैले, तपाईंको रोजाइमा सत्य पर्‍यो!
तपाईंले जो बाइडेनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका आगामी राष्ट्रपतिका रूपमा छान्नु भएको छ। बाइडेन पीडा हरण गर्ने व्यक्ति हुन्, एकता गराउने सज्जन हुन्। उनी परिक्षित र परिपक्व नेता हुन्। अफ्नो जीवनमा भोगेका हारको अनुभवले पनि उनी स्वयं र हामीलाई पनि निश्चित उद्देश्यतिर लैजाने आँट दिन्छ। यसले हाम्रो उद्देश्य फेरि भेट्न सहयोगी पनि हुन्छ।
बाइडेन ठूलो हृदय भएका मानिस हुन् जसले अपेक्षाबिनाको प्रेममा अघोरै विश्वास गर्छन्। त्यो उनकी पत्नी जीलप्रतिको उनको प्रेम हो। जील अब प्रथम महिला हुँदै छिन्, यो अभूतपूर्व कुरा हो। यो उनको परिवारका सदस्यप्रतिको प्रेम पनि हो। हन्टर, एस्ले, सबै नातिनातिना र बाइडेन परिवारप्रतिको।
मैले जोलाई पहिलो पटक जब उपराष्ट्रपतिका रूपमा चिनेकी थिएँ तब उनलाई ब्यु बाइडेनका बुवाका रूपमा पनि चिनेँ। ब्यु मेरो प्यारो साथी पनि थिए। यो बेला म उनलाई पनि सम्झन चाहन्छु।
मेरा श्रीमान् डग्लस, हाम्रा बच्चाहरू कोल र इला, मेरी बहिनी माया र हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई व्यक्त गरेर नसकिने माया टक्र्याउँछु ! यो अविश्सनीय यात्रामा हाम्रो परिवारलाई पनि सामेल गराएकोमा जो (बाइडेन) र (श्रीमती) जीलप्रति कृतज्ञ छौं।
म आज जहाँ उभिन पाएकी छु, यस ठाउँमा पुर्‍याउन सघाउने महिला तथा मेरी आमा श्यामला गोपालन ह्यारिसलाई त कसरी बिर्सनु! उनको ठाउँ त हृदयमै छ!
मेरी आमा इन्डियाबाट यहाँ आउँदा जम्मा १९ वर्षे तरुणी थिइन्। त्योबेला, म यहाँसम्म पुगूँला भन्ने कल्पना त के गर्न सक्थिन् होला र आमाले। तर, उनलाई गहिरो विश्वास थियो, अमेरिकामा यो सम्भव छ भनेर। त्यसैले, मैले मेरी आमा र उनीजस्ता अनेक, जस्तै कालो वर्णकी, एसियाली, गोरी, ल्याटिन र यहीँका (नेटिभ) महिलाको पुस्ताको बारेमा पनि सोच्दैछु जो आजको दिन ल्याउन मुलुकको इतिहासभर तल्लीन भएर लागे।
ती महिलालाई पनि सम्झँदै छु जसले समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका लागि त्याग गरेका थिए। तीमध्ये अश्वेत महिला पनि विशेष सम्झनामा छन् जो प्रायः उपेक्षित हुन्छन्। यद्यपि, ती अश्वेत महिलाले पनि आफूलाई हाम्रो लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रमाणित गरेका छन्।
मतदान गर्न पाउने अधिकार शताब्दीयता सुरक्षित गर्न, १०० वर्षअघि १९ औं संशोधनका खातिर, ५५ वर्षअघि भोटिङ राइट एक्टका खातिर र अहिले २०२० मा आएर नयाँ पुस्ताका महिलाले भोट गर्ने आफ्नो आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न र आफ्नो आवाज सबैलाई सुनाउन यथासम्भव लडे र लडिरहेका छन्। सबैलाई हृदयदेखि सम्झन चाहन्छु।
आज राती म तिनै महिलाको संघर्ष, संकल्प र दूरदर्शिताको शक्तिमाथि चिन्तन गर्दै छु। यसकारण कि यिनले उठाएको बोझ अब बिसाउन सकियोस्। यी सबै संघर्षमा म काँध थापेर उभिन्छु। बाइडेन यस्तो चरित्र र इच्क्षाशक्ति भएका व्यक्ति हुन् जसले हाम्रो देशमा भएका सबै अवरोध र बाधा तोड्दै आफ्नो उपराष्ट्रपतिका रूपमा महिलालाई छनौट गर्ने साहस गरेका छन्।
उपराष्ट्रपतिका रूपमा यो कार्यालयमा पाइलो राख्ने म प्रथम महिला हुन सक्छु, अन्तिम हुने छैन। किनभने, यो विजयोत्सवको रात हरेक बालिकाको आँखामा सपना बनेर नाचिरहेको छ। यो देशमा हुने सम्भावनाको प्रचूरतामा यी केटाकेटीले दृष्टि पुर्‍याइरहेका छन्।
हाम्रो देशका प्रिय बालबालिकाहरू! तपाईंको लैङ्गिकता जेसुकै भए पनि तपाईंलाई हाम्रो देशले एक प्रष्ट सन्देश दिएको छः कुनै पनि कुराको पर्वाह नगरी, महत्त्वाकांक्षाका साथ सपना देख्नुहोस्। दृढ विश्वासका साथ डटेर लाग्नुहोस्। अरू कसैको आँखा नगएको ठाउँमा हेर्नुहोस् किनभने तिनले त्यहाँ कहिल्यै हेरेकै थिएनन्। हामी तपाईंको हरेक कदममा ताली बजाएर प्रोत्साहन दिने छौं।
सम्पूर्ण अमेरिकी जनतालाई प्रष्ट सन्देश दिन चाहन्छुः तपाईंले जोसुकैलाई मतदान गरेको भए पनि, जसरी जो बाइडेन ओबामाका प्रिय उपराष्ट्रपति भए म उसैगरी त्यो ठाउँमा रहनेछु। म पूर्णतः निष्ठावान र इमानदार रहनेछु। हरेक बिहान तपाईं र तपाईंको परिवारको सेवामा लगनशील भइ खट्ने तयारीसाथ उठ्नेछु।
किनभने, घुँडा धसेर काम गर्ने सही बेला हाम्रो अगाडि छ। यो महामारीलाई परास्त गरी जीवनरक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनःनिर्माण गर्ने याम हो, जसले काम गरी खाने जनतालाई टेवा देओस्। हाम्रो समाजमा जरो गाडेको रंगभेद उखेलेर फाल्ने काम हो। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटसँग जुध्ने काम हो। राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर यसको आत्मामा मलम लगाउने सही याम यही हो। यो याममा यी सबै काम गरेर म देखाउनेछु।
अगाडिको बाटो सजिलो छैन। तर, यसको सामना गर्न अमेरिका तयार छ। म र जो बाइडेन पनि तयार छौं!
हामीले एउटा यस्तो राष्ट्रपति चुनेका छौं जसले हाम्रो सबभन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ। एउटा यस्तो नेता चुनेका छौं जसलाई दुनियाँले सम्मान गर्छ। हाम्रा बालबालिका आँखामा आउँछन्। एउटा यस्तो कमान्डर इन चिफ छानेका छौं, जसले हाम्रो सेनालाई सम्मान गर्दै हाम्रो राष्ट्र सुरक्षित राख्नेछ।
हामी सबै अमेरिकीका लागि एउटा राष्ट्रपति चुनेका छौं– जो बाइडेन !
(हालै सम्पन्न अमेरिकी निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिमा विजयी कमला ह्यारिसको भाषणको सबिता आचार्यले गरेको भावानुवाद)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७, १५:०६:००